Aagagga Diirran ee Seoul
Xagee la aadaa iyo maxaa la sameeyaa?
Waxaad u badan tahay inaad taqaanid magacyada Itaewon, Myeongdong ama Hongdae, laakiin runti ma ogtahay nooca waxyaalaha aad ka qaban karto aagaggan? Waxaad ka heli doontaa sharraxaadda balooggan iyo waxqabadka meelaha ugu caansan uguna ugu wanaagsan Seoul! Sidaa daraadeed, xitaa haddii joogitaankaaga Seoul uu gaaban yahay, waxaad awood u yeelan kartaa inaad doorato meelaha aad rabto inaad booqato iyo waxyaabaha aad rabto inaad halkaas ku sameyso!
Hongdae waa hubaal meesha ugu wanaagsan ee dhalinyarada soo booqata Seoul. Meerahan ardayda wuxuu ku yaal meel u dhow Jaamacadda Hongik waxaadna qaadan kartaa dhulka hoostiisa, khadka 2 si aad u booqato meeshan aadka u kulul. Waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo ay tahay inaad sameyso, laga bilaabo dukaanka ilaa karaoke, illaa cunida cunnada macaan ee makhaayadaha, kuwaas oo badanaa la awoodi karo. Waqtiga badankood, waxaad heli doontaa fursad aad ku saacidid baska tooska ah ama qoob-ka-ciyaarka oo sameeya riwaayado cajiib ah oo ku saabsan heesaha kpop. Aaggan ayaa ah mid aad loogu qadariyo dadka dalxiisayaasha ah laakiin sidoo kale ka mid ah kuwa xoolo dhaqatada ah. Waad geli kartaa iftiinka maalintii ama habeenkii, markasta waxaad helaysaa waxyaabo xiiso leh oo la sameeyo.
Dhanka Itaewon, hadda waa meesha ugu wanaagsan ee Seoul iyo xitaa wax badan ka dib markii dib loo soo bandhigo riwaayadii guuleysatay ee “Itaewon Class” taas oo keentay xitaa dalxiisayaal badan aagga. Itaewon waa degmo caalami ah oo aad ka heli karto makhaayado laga helo adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan dhaqamo iyo diimo isku jira. Xaqiiqdii waxaad ka heli kartaa Masaajidka ugu horreeya ee Seoul ee Itaewon, oo ay ku hareereysan yihiin dukaamada xalaasha ah iyo makhaayadaha. Laakiin waxaas oo dhan, Itaewon wuxuu caan ku ahaa kaqaybgalka iyo naadiga. Runtii waxaa jira tiro baararka, naadiyada iyo karasiyada. Taasi waa sababta degmadani ay u jecel yihiin shisheeyaha iyo koreerka.
Myeongdong waa aag loo baahan yahay inaad tagto haddii aad qorsheyneyso inaad wax ka dukaameysato oo aad u keento hadiyado iyo hadiyado saaxiibadaa iyo reerkaagaba. Dabcan, waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad uga baahan tahay halkaas iyo waxyaabo badan! Iyo kuwa jecel qurxinta waxyaalaha la isku qurxiyo kani waa jannadaada, maadaama ay yihiin boqolaal nooc oo caan ah ilaa kuwa aan la aqoon. Ywaad heli doontaa waxkasta oo aad raadineysid. Qaybta ugu fiicanna waa, inay jirto cunno dariiqyada hareerahaaga ah! Waxaad ku raaxeysan kartaa dukaamaysiga inta aad cunaysid cunto fudud oo korea ah oo aadan waligaa isku dayin, sida rootiga Egg ama Tornado Potato.
Gangnam macno ahaan waxaa loola jeedaa 'koonfurta webiga, maadaama ay ku taal meel ka hooseysa Han River. Gangnam waa xarunta moodada, dabaqa iyo casriga ah ee Seoul soo jiidashada xiisaha leh oo ay ku jiraan dukaamada, makhaayadaha iyo dabaqyada. Gangnam wuxuu caan ku yahay dadka wax iibsada. Waxaad ka heli kartaa weyn suuqyada waaweyn sida 'COEX', iyo sumadaha naqshadaha dhaadheer. Haddii aad xiisaynayso muusikada Kuuriyada (K-pop), waxaad ka heli kartaa dhowr wakaaladood oo Kpop ah sida Bighit Entertainment, SM Town, JYP madaddaalada… Habeenkii xiisaha ee aagga ayaa sidoo kale ah mid aad u mashquul ah oo firfircoon oo leh meelaha lagu caweeyo ee habeenkii ah iyo baararka, taas oo ka dhigaysa aaggan mid Meel aad ufiican oo lagu cayaaro oo lagu raaxeysto nolosha ilaa waagu baryo!
COEX gudaha Gangnam
Han River iyo nawaaxigeeda waxay ku taal bartamaha Seoul oo u kala go'day magaalada 2. Waxay u tahay meel caan ku ah dadka deggan caasimadda. Meeshani waa nooc ka mid ah safarada safarka mini ee aan loo baahnayn in horay loo sii qorsheeyo dalxiiskaaga. Waxaad ku nasan kartaa oo aad ku raaxeyn kartaa waqti wacan adiga iyo qoyskaaga, asxaabtaada iyo kuwa aad jeceshahayba oo ku leh dhowr beerood oo ku xeeran. Loogu talagalay odadka raba waxoogaa yar oo ah adrenaline ah, waad ku raaxeysan kartaa isboortiga biyaha ama baaskiil fuushan webiga agtiisa. Ka sokow, haddii aad wax gaajoonaysid cuntadaada ayaa laguugu soo gelin karaa jidka dhexdiisa!
Degmada Insadong, ku yaal bartamaha magaalada Seoul, shisheeyaha ayaa caan ku ah dukaamanka iyo maqaayadaha badan. Iskusoo wada duuboo waxaa caan ku ah jidadkeeda iyo jawiga taariikhiga ah iyo jawiga casriga ah ee aad ka heli karto halkaas. Waa aag u gaar ah Seoul oo runtii astaan ​​u ah taariikhihii Kuuriyada Koofureed. Agagaaraha degmada Insadong, waxaad ka heli kartaa daaqado laga soo bilaabo xilligii Joseon. Farshaxanku sidoo kale wuxuu ku leeyahay meel caan ah Insadong. Goobo badan Muujinta dhammaan noocyada farshaxanimada kala duwan laga soo bilaabo rinjiyeynta dhaqameed ilaa farshaxannada ayaa laga heli karaa meel kasta. Hadana, guryaha shaaha ee dhaqanka iyo maqaayadaha waa meelaha ugufiican ee lagu dhammaystiro booqashada degmadaan ..
Waxa Qoray Soukaina Alaoui & Caillebotte Laura